Zimbabwe Human Rights assists post election violence victims – Zimbabwean Online TV
Zimbabwe Human Rights assists post election violence victims
By Evans G Mathanda	 On Oct 5, 2018
Human Rights Forum Executive Director, Mrs Blessing Gorejena says the State is directly responsible for the death of six innocent civilians that died during post election violence that rocked the capital city of Harare on the 1st of August.
Addressing journalists today at the Media Centre in Harare Mrs Gorejena squarely laid the blame on the military and also indicated that the Human Rights Forum will produce a full report on the events of August 1.
Weighing in the Forum chairperson, Mrs Mushoko, said “the forum is yet to produce a detailed report of the post election Harare violence which will be shared with all the citizens of Zimbabwe.”
“The forum remains ready to be at the service of the commission in assisting it to arrive at the truth,” she added.
Institutions will work with the commission to ensure there is due process of law, the commission of inquiry will carry out investigations @Jesmunga @SwedeninZW @NLinZimbabwe @NPRCZim @BlessieGore @263Chat @zhrc365 @Wamagaisa @dewamavhinga @edmnangagwa @TajamukaZW
— Human Rights Forum (@ZimHRNGOForum) October 5, 2018
The Human Rights Forum has a 20 year history of documenting human rights violations with 20 active member organisations spread across the country.
On the 1st of August protesters congregated outside the Rainbow Towers where the Zimbabwe Electoral Commission Command Centre was housed angrily demanding that Commission release Presidential results without further delay.
The Zimbabwe Human Rights NGO Forum is a coalition of twenty-one human rights NGOs in Zimbabwe who while having their own objectives, are concerned with the level and nature of organized violence and torture in the country perpetuated mainly, though not exclusively, by state agents and their ancillaries.
It came into existence at the time of the Food Riots in 1998.
protestersThe Human Rights ForumZimbabwe Electoral Commission
Clint Penate says 6 months ago
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site, utterly great subject material.